Ciraaqiyiin laga tarxiilay Sweden | Somaliska
Sweden ayaa 20 Ciraaqiyiin ah ka tarxiishay dalka maalintii arbacada ka dib markii loo diiday sharciga deganaanshaha. Sweden ayaa cambaareyn kala kulantahay tarxiilkaan ayadoo horey ay u amartay Maxkamada Xuquuqda aadanaha ee Midowga Yurub in la joojiso tarxiilada balse maxkamada ayaa arintaan dib u eegtay oo ogolaatay in dadkaan dalka laga saaro. 25 qof ayaa lagu xiray shalay magaalada Stockholm ka dib markii ay dhigeen mudaharaad ay isku dayeen in ay joojiyaan gaadiidka qaadayay dakaan la tarxiilayay ayadoo magaalada Göteborg sidoo kale lagu xiray 70 qof oo ayaguna isku dayay in ay joojiyaan tarxiilka. Laanta Socdaalka Sweden ayaa go'aamisay sanadkii 2007 in aysan dhibaato weyn ka jirin dalka Ciraaq oo aan ciraaqiyiinta layska aqbali doonin. Sweden ayaa hada tixgalinta siisa dadka Ciraaqiyiinta ah ee Kiristaanka ah.
Ciraaqiyiin laga tarxiilay Sweden
Sweden ayaa 20 Ciraaqiyiin ah ka tarxiishay dalka maalintii arbacada ka dib markii loo diiday sharciga deganaanshaha. Sweden ayaa cambaareyn kala kulantahay tarxiilkaan ayadoo horey ay u amartay Maxkamada Xuquuqda aadanaha ee Midowga Yurub in la joojiso tarxiilada balse maxkamada ayaa arintaan dib u eegtay oo ogolaatay in dadkaan dalka laga saaro.
25 qof ayaa lagu xiray shalay magaalada Stockholm ka dib markii ay dhigeen mudaharaad ay isku dayeen in ay joojiyaan gaadiidka qaadayay dakaan la tarxiilayay ayadoo magaalada Göteborg sidoo kale lagu xiray 70 qof oo ayaguna isku dayay in ay joojiyaan tarxiilka.
Laanta Socdaalka Sweden ayaa go’aamisay sanadkii 2007 in aysan dhibaato weyn ka jirin dalka Ciraaq oo aan ciraaqiyiinta layska aqbali doonin. Sweden ayaa hada tixgalinta siisa dadka Ciraaqiyiinta ah ee Kiristaanka ah.
Waa imisa tirada Soomaalida iska dhiibtay Sweden sanadkaan?